पूर्वतयारी तीव्र : हजार आइसोलेसन बेड | Sajhakhabar पूर्वतयारी तीव्र : हजार आइसोलेसन बेड | Sajhakhabar
पूर्वतयारी तीव्र : हजार आइसोलेसन बेड
काठमाडौं, चैत ७ : सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एक हजारभन्दा बढी आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राख्ने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाले उपचारका लागि पूर्वतयारी गरिएको हो । उपत्यकामा १ सय २० वटा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) बेड तयारी अवस्थामा छ । उपत्यकाबाहिर पनि सोहीअनुसारको तयारी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ।
कोरोनाको नमुना परीक्षण : ५२९
भाइरस नेगेटिभ देखिएको : ५२८
भाइरस पोजेटिभ : १ (निको भइसकेको )
पछिल्लो समय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदारहँदै शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको डा. खतिवडाले बताए । डब्लूएचओले नेपालसहित दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको बिहीबार जनाएको थियो । डब्लूएचओको दक्षिणपूर्वी एसियाकी निर्देशक पुनम खेत्रपाल सिंहले संक्रमणबाट बचाउने प्रयास गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
संक्रमणको प्रभाव पर्न सक्ने जनाएपछि शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपरेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्री खतिवडाले दीर्घकालीन असर नपरोस् भन्ने हेतुले शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ अभिभावकले पनि विद्यार्थीलाई किन जोखिममा राख्ने भन्ने दबाब दिएको विषय पनि मनन ग¥यौं । नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिले पनि परीक्षा सार्दा के बिग्रन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नुभयो । जोखिममा विद्यार्थीलाई किन राख्ने भन्ने भएपछि केही समयका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको हो ।’
संक्रमणबाट भारतमा ४ जना, पाकिस्तानमा एक, बंगलादेशमा एक जनाको ज्यान गएको छ । मृत्यु भएका सबै विदेशबाट संक्रमित भई स्वदेश फर्केका थिए ।
श्रीलंकामा संक्रमण फैलन नदिन कफ्र्यु लगाइएको छ । त्यस्तै पाकिस्तानका राष्ट्रपति रसिद अल्बी क्वारेन्टाइनमा छन् । डब्लूएचओले हालसम्म १ सय ६६ मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिसकेको जनाएको छ । संक्रमितको संख्या २ लाख नाघिसकेको छ । ८ हजार ६ सय ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकबाट आएका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । ५ सय २९ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५ सय २८ जनाको भाइरस नेगेटिभ देखिएको छ । डेढ महिनाअघि भाइरस पोजेटिभ देखिएका युवा अहिले निको भइसकेका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले दिनहुँ परीक्षण गरिरहे पनि भाइरस संक्रमित व्यक्ति कोही नभएको बताइन् ।
तेस्रो चरणमा पुग्न नदिइने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना भाइरस संक्रमणको चार तह हुने चर्चा गर्दै महामारीको अवस्थामा पुग्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भट्टले स्वदेशमा भाइरस भित्रन नदिने र संक्रमण भइहालेमा तेस्रो चरणमा जानबाट रोक्ने बताए । ‘पहिलो प्रयास त कोरोना भाइरसलाई आउनै नदिने हो । भाइरस आइहालेमा तेस्रो चरणमा जान नदिने हो’, उनले भने । संक्रमण रोक्न जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
यसैबीच चीन सरकारले एक लाख एन ९५ मास्क र २० हजार थान थर्मल गन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् ।